Rock mass classification systems [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ် > မြို့ ပြအင်ဂျင်နီယာပညာ > Geotechnical and Geological Engineering > Rock mass classification systems
View Full Version : Rock mass classification systems
Rock mass တွေရဲ့ quality ကို empirical methods သုံးပြီး ခွဲကြည့်ရအောင်....
ပြီးယင် feasible support system လေးတစ်ခုထုတ်ကြည့်ရအောင်....
ဒီ empirical methods တွေက ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရော ကမ္ဘာမှာပါ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးနေကြတာပါ...
ပထမဆုံးဆွေးနွေးချင်တဲ့ empirical method ကတော့ Rock mass rating system လို့ခေါ်တဲ့ (RMR) အကြောင်းပါ...
RMR အကြောင်းဆွေးနွေးမှာ ဆိုတော့ သူ့ရဲ့ မူရင်းဇစ်မြစ်လေး အကြောင်းကို စပြီးမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ....
Bieniawski (1973) initially developed the rock mass rating system (RMR), otherwise known as the geomechanics classification. It was modified over the years as more case histories, became available and to conform to international standards and procedures (Bieniawski, 1979).
Uniaxial compressive strength of intact rock (UCS),
rock quality designation (RQD),
spacing of discontinuities,
conditions of discontinuities,
ground water condition and
ဆိုတဲ့ six parameters အပေါ်မှာ အခြေခံပြီး rock mass quality ကိုခွဲပါတယ်....
အောက်ကလင့်မှာလဲ ဒေါင်းလုပ် လုပ်နိုင်ပါတယ်...
ဒီဇယားက Bieniswki 1989 က developed လုပ်ခဲ့တဲ့ဇယားပါ...
အဲဒီနောက် ထပ်ပြီး develope ဖြစ်လာတဲ့ဇယား မတွေ့မိပါဘူး...
အထက်မှာ ပြောခဲ့ တဲ့ အဓိက parameters ၆ ခုကို field မှာ နဲ့ laboratory မှာ အရင်ရှာရမယ်...
Uniaxial compressive strength of intact rock ကလွဲလို့ ကျန်တာတွေအားလုံးက field မှာ investigation လုပ်ရမှာတွေချည်းပဲ..
ဇယားမှာ နံပါတ် (၁) က strength of intact rock material
strength of intact rock material ကို သတ်မှတ်ဖို့က point load strength index ဒါမှမဟုတ် Uniaxial Compressive strength ကို သုံးသုံး တစ်ခုကို သုံးယင်ရပြီ
များသောအားဖြင့် Uniaxial compressive strength ကို သုံးကြတယ်..
ဒါက laboratory မှာ စမ်းမယ်ဆိုယင်လဲ ပိုလွယ်လို့...
laboratory မှာ မစမ်းနိုင်ဘူးဆိုယင် သူ့ရဲ့ typical value တွေကို ယူသုံးယင်လဲရပါတယ်...
Field မှာ Geologic hammer နဲ့ ခေါက်ကြည့် ခြစ်ကြည့်ယင်လဲ ကျောက်ရဲ့ Uniaxial compressive strength ကို အနီးစပ်ဆုံးခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်...
အိုကေ ကျောက်ရဲ့ Uniaxial compressive strength (UCS) တန်ဖိုးကို သိပြီဆိုပါစို့.... eg... UCS = 30 MPa,
ဒါဆို ဇယားမှာကြည့်လိုက်ယင် သူ့ရဲ့ rating တန်ဖိုးကို4လို့တွေ့လိမ့်မယ်....
အဲလိုနဲ့ parameter တစ်ခုခြင်းစီရဲ့ rating တန်ဖိုးတွေကိုရှာ ပြီးယင် rating တန်ဖိုးအားလုံးကိုပေါင်း....
ဇယားရဲ့ ခေါင်းစဉ်ခွဲ C မှာ ကြည့်ယင် ကျောက်က class I လား Class II လား... very good rock လား... fair rock လားဆိုတာ သိနိုင်တယ်...
အဲလိုသိပြီဆိုယင် ဘယ်လို support system မျိုးကို သုံးပြီး stabile ဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာ နောက်ပိုင်း ဆက်ဆွေးနွေးပါ့မယ်...
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ဆက်ရေးပါဦးနော်။ ဇယားကို image ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး http://imageshack.us/ မှာ upload တင်လိုက်ပါ။ ပြီးတော့အဲဒီက လင့်ကို copy ယူပြီး paste လုပ်လိုက်ရင် ဆွေးနွေးချက်မှာ ဇယား ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရှာရင်းဖွေရင်း rock lecture note တွေရယူနိုင်တဲ site လေးတွေမိလို့ပါ။
အထက်ကပြောထားတဲ့ Classification of Rock mass system အကြောင်း ကို ဆွေးနွေးပါမယ်။
Bieniawskias ရဲ့ rock mass classification system အရ Rock mass rating (RMR) ရဲ့ value ဟာ ကျောက်ရဲ့ quality ပေါမူတည်ပြီး0to 100 ထိရှိပါတယ်။ အဓိကအခြေခံထားတဲ့ parameter ၆ ခုကတော့
အထက်ကပြောထားတဲ့ အတိုင်း Strength of rock က တော့ Laboratory compression test ကနေ ရပါ မယ်။
Rockmass increments for Compressive strength ကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ UCS ဟာ5Mpa ဖြစ်ပါက Rating increment ဟာ 1 ဖြစ်ပါတယ်။
drill core quality ဆိုတာက တော့ ကျေက်တွေကို coring လုပ်ပြီးထွက်လာတဲ့ core run ကနေ ရလာတဲ့ core pieces တွေထဲက 10 cm ထက် ပိုတဲ့ intact core pieces length စုစုပေါင်းကို total core run length နဲ့စားပြီး ရလာတဲ့ % ဖြစ်ပါတယ်။
Core diameter ကတော့ NW size ဖြစ် တဲ့ (54.7 mm or 2.15 inches )ဖြစ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ အနေ နဲ့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Rockmass increments for drill core quality ကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Spacing of joints / discontinutues
Rockmass rating increments for Spacing of joints ကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ spacing of joint ဟာ 300 mmဖြစ်ပါက Rating increment ဟာ 10 ဖြစ်ပါတယ်။
RMR နဲ့ RQD ပုစ္ဆာတွေ ကျွန်တော့်ဆီမှာ ရှိပါတယ်။ နမူနာ တွက်ချင်သူတွေ အတွက် တင်ပေးပါ့မယ်။ တခြား လေ့လာလိုသူတွေလည်း လေ့လာလို့ရအောင်ပေါ့။ အပေါ်က ရှင်းပြထားပြီးသားဖြစ်လို့ တွက်ထားတဲ့ ပုစ္ဆာတွေကို နောက်မှ အဖြေနဲ့ တကွ တင်ပေးပါ့မယ်။
ရှိတယ်ဆိုရင်တင်သာတင်လိုက်ပါ။ ကျောင်းသားဘ၀ ၁၉၉၄ လောက်က Rock Mechanic အတန်းယူခဲ့တုန်းက တော့ တွက်ခဲ့ ဘူးပါတယ်။ အလုပ်ထဲရောက်တော့ တခါမှတွက်ဖို့ အခွင့် အရေးမကြုံခဲံ့ ပါ။ အလုပ်နဲ့ မသက်ဆိုင်တော့ လည်း တကူးတကန့် ရှာမတွက်ခဲ့ ပါ။ အခုလို ဖိုရမ်မှာတင်မယ်ဆိုရင်တော့ တွက်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
engineering geology နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ post ဆိုရင်ဖြစ်နိုင် ရင် အသုံးချဘူမိဗေဒ (http://www.myanmarengineer.org/forums/forumdisplay.php?399-%E1%80%98%E1%80%B0%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%B1%E1%80%97%E1%80%92-%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%95-%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BA-%E1%80%98%E1%80%B0%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%B1%E1%80%97%E1%80%92) အောက်မှာတင်ပေးပါ။
ဒီ sub-forum ကို Geotechnical and Geological Engineering လို့ ပေးခဲ့ ရတာ အဲဒီအချိန်က ဘူမိဗေဒ ဖိုရမ်ရယ်လို့ မရှိခဲ့ သေးလို့ ပါ။
RMR problem 1
A tunnel is to be driven through slightly weathered basalt withadominant joint set dipping 50 degree with the direction of drive. Uniaxial compressive testing and logging of diamond drilled core give uniaxial compression strength 105 MPa and average RQD value of 85 % rough and slightly weathered joint with 3m length speration of < 0.1 mm and no filling material are spaced 2.5m. Tunnelling conditions are anticipated to be damp.
1 ) Find the total RMR
2 ) Find the rock class
3 ) Find stand up time, cohesion and internal friction angle.
RMR problem 2
A tunnel is to be driven through moderately weathered sand stone withadominant joint set dipping 40 degree with the direction of the drive. Uniaxial compressive testing and logging of diamond drilled core give uniaxial compressive strength of 52 MPa and average RQD value of 76 %. The rough and slightly weathered joint with5to 8m length separation of < 1mm and no filling material are spaced 700mm. Tunnelling conditions are anticipated to be dripping.
1 ) Determine the rating RMR
2 ) Determine Rockmass class from total rating
3 ) Estimate the stand up time, cohesion and internal fraction angle.
RMR ပုစ္ဆာတွေကို နမူနာ အနေနဲ့ ပေးထားတာပါ။ ကျွန်တော့်ဆီမှာ နောက်ထပ် ရှိနေပါသေးတယ်။ အများကြီးတင်ရင် ပျင်းသွားမှာစိုးလို့ပါ။ အဲဒီထဲမှာပါတဲ့ အကြောင်းလေး နည်းနည်း ပြောချင်လို့ပါ။ ဥမင်တွေ ဖောက်ပြီးချိန်မှာ မြေအောက်ရေတွေရဲ့ အနေအထားနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စကားလုံးလေးတွေကို နည်းနည်း ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ Ground Water မှာ general conditions အနေနဲ့ ၅ ခု ရှိပါတယ်။ Completely, Damp, Wet, Dripping , Flowing ဆိုတာလေးတွေပါ။ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း ကြုံနေဦးမှာပါ။ ရေးတဲ့နေရာ မလွဲစေချင်လို့ သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ ပြောပြချင်တာပါ။ Completely ဆိုတာကတော့ ရှင်းပါတယ် မျက်နှာပြင်ဟာ လုံးဝ ခြောက်သွေ့နေတာမျိုးပေါ့ ၊ Damp ကတော့ စိုထိုင်းနေတယ် အဲဒီဟာကို ပြောချင်တာပါ သူက လက်နဲ့ စမ်းကြည့်လို့ရှိရင် လက်ကို ရေမစိုရပါဘူး။ ခပ်ငွေ့ငွေ့လောက်သာ ရှိနေရမှာပါ။ Wet condition ကျမှ လက်ကို ရေစိုရပါမယ်။ အဲဒီနှစ်ခုက ရောတတ်ပါတယ်။ အရေးမှားရင် structure မှာပါ သွားထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ Dripping ကတော့ များသောအားဖြင့် ရေတွေ တစက်စက် စီးကျနေတာမျိုးပေါ့။ တခါတရံမှာ အဲလို မတွေ့ရပေမဲ့ fracture or crack ပေါ်နေတတ်ပါတယ် ချက်ချင်းတော့ ရေလိုက်မလာတတ်ဘူး။ သတိထားပါ။ Flowing ဆိုရင်တော့ အမြန်ဆုံး ကုစားဖို့ ပြင်ထားပေးတော့။ အသံတွေ ပြင်းလာပြီဆိုရင်တော့ ဘာမှလုပ်မနေနဲ့တော့ အမြန်ဆုံးသာ ပြေးနိုင်အောင် စဉ်းစားပါ။ :P
ကျောက်တွေအကြောင်း လေ့လာနိုင်အောင်လို့ တွေ့တဲ့ ပါဝါပွိုင့်ဖိုင်လေး လာတင်ပေးတာပါ ခင်ဗျာ။ http://hotfile.com/dl/133032228/759592d/Understanding_the_Rocks.ppt.html